Kusejusiwa neWorkmate yangu Janet, apa ranga riri bullet! – Vanoda Zvinhu
Tainge takutoziva kuti vazhinji vedu musi uyu taishanda mboro dzakamira nekupfeka kwaiyita vasikana vekubasa kwedu.Janet ainge ane mazamu mahombe zvekuti chero chainge akapfeka mboro yaitomira chete. Musi uyu Janet akauya akapfeka tracksuit Adidas yainge yakabata pese, beche rake taitowoneka kudhinda pamberi pese rakaita V zvekuti murume wese akaswera akayeverwa naJanet. Janet ainge arimukadzi akaroorwa ane vana 2 but kunyangwe zvinhu zvake zvainge zvakakura aigona kuzvibata.
Varume vakawanda vakatanga kuti Janet nhasi ndoyenda newe apa iye aingosekerera, ndokubva ati aah mese matangirwa naBilly ndini wacho uyo aitaurwa asi ndainge ndisina kana kutaura anything but ndakangoita play along as if ndainge ndadaro.Janet ainge atori serious but inini ndaitya nekuti ndaiziva murume wake saka iye anenge akazviona ndokubva ati asi urikutya here, ndikabva ndati aah urikuda kuti ndirohwe naJames here. Akatanga kuseka akati James haapo sha ndakatokuvara nezemo saka ndaziva kuti ndikachuza mumwe waizoudza Jimmy ndosaka ndati ndirikuyenda newe. Chokwadi ndirikutoda zvekusvirwa sha and iwewe chete ndiwe ungatondibatsira.
Ndakangoti if you are sure its fine toyenda tese asi hana yangu yairova zvekuti waiti ukaisa ruoko waitofunga kuti munhu uya anga achimhanya zvine speed. Tapedza basa takapinda tese mumota yake apa vanhu vekubasa vakatarisa I am sure vamwe vaitoti ndatosvira kare vamwe vachiti haa mukadzi weshamwari yake ndokubva tayenda hedu. Takatenderera around pabasa vanhu vese ndokubva taona vabuda ndokudzokera muOffice ya Janet apa kuzvimba kwainge kwayita matinji aJanet waingona kutotresera nekudhinda kwainge kwakaita beche iroro apa richiratidza kuti rihombe rakafuta ndikanzwa ropa richimhanya muviri wangu wese plus ndaibva ndawona juice dzake pamberi pake.
Nguva yekubatana painge pasina inini mboro yainge yamira kare iye ainge atota zvakare saka akabva agara pachair ndokubva ndaipushira paseri pedoor kuitira kana pakaita macleaner anouya kuzocleaner maOffice. Saka taingoda kuita kaquickie sevanhu vaitya kubatwa, ndakaita kupfugama tese takatarisa mboro ichipinda mubeche raJanet apa iri nyoro ndikanzwa munhu ayita kutura mafemo mboro ichinobaya pachibereko. Ndakatanga kukoira zvishoma nezvishoma ndichinzwa Janet achichemerera nekunakirwa position iyi yaindikuvadza ma knees angu ndokubva ndaita kumurarisa pacarpet muoffice apa ndipo pandakatanga kunyatsokoira zvekuti munhu ainge akungori aaahh aaahhha aaaaaahhh achideedzera kuti unonaka kani, svirisa kani ndakuda kutunda kani, ndipo pandakabva ndaita manyemwe ndokutanga kuita zvine speed Janet akatunda katwo ndokubva inini ndazongoti tsaaa tsaaaa tsaaaaa, huronyo everywhere nekuti ndakaburitsa mboro mubeche rake coz one thing chandainge ndisingade ndechekuti ayite nhumbu yangu otherwise James aizondiponda nekuti ayida mukadzi wake zvisingaite..
PREVIOUS POST Previous post: Zvakandikurira Ndikarova nyoro kuParty!
NEXT POST Next post: Ndakasvirwa nefudza mombe ndayenda kumusha ndikabva ndakanganwa kuti ndakaroorwa!